That's so good, right?: April 2009
My Second Time – A Real Cowboy
ကျွန်တော့်ငယ်စဉ်ဘ၀မှာ လမ်းပေါ်ပျော်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့၊လမ်းပေါ်မှာပဲနေဖို့ အကြောင်းဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် အဖေတို့က ကျွန်တော့်ကို အလိုမရှိလို့ ဖြေရမယ်။ လမ်းမကြီးပေါ်နေထိုင်ရတာဟာလည်း ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးပညာရေးအစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။လမ်းပေါ်လူတွေဟာ ဘယ်လိုအသက် ရှင်ရမယ်၊ ဝေမျှရမယ်၊ ပြီးတော့ အချင်းချင်း ဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတာတွေကို နားလည်ကြတယ်။ တစ်ခါကများ ကျွန်တော့် ပြဿနာကို သူတို့သိသွားပုံပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကောင်ငယ်လေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပုံမျိုး။ သူတို့ဟာ ကျွန်တော် စိတ်တင်းကျပ်မှုတွေကို နားလည်ပေးနိုင်သလို ကာကွယ်မှုလည်း ပေးနိုင်ကြတယ်။
ကော်ဖီဆိုင်တစ်ချို့မှာ ပုဂံခွက်ယောက်တွေကို ဆေးကြောပေးတယ်၊ ကြမ်းပြင်တွေကို ဆေးကြောခိုင်းရင်လည်း သန့်ရှင်းပေးခဲ့တယ် ပိုက်ဆံရဖို့လေ။ အဲဒါကိုရဖို့ ဘယ်အလုပ်ကိုမဆိုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီအလုပ်တွေဟာ ငယ်ရွယ်သူ ကျွန်တော့်လိုလူငယ်လေးတစ်ယောက်အတွက် အလွန်ဆိုးရွားတာပေါ့။ ရာသီဥတုက အေးခဲသွားလောက်အောင်အေးပေမဲ့ ပိုက်ဆံလေးရဖို့လှုပ်ရှားရတာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ဈေးပေါ ရုပ်ရှင်ရုံကိုသွား၊ ထိုင်ငေးရင်း အနွေးဓာတ် ယူရသပေါ့။ နေ့စဉ်တိုင်းဟာ သင်ခန်းစာအသစ်တွေကြီးပါပဲ ကျွန်တော့်အတွက်လေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတာ သင်ပေးတယ်ပေါ့။ လမ်းပေါ်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တိုက်ခိုက်ကာကွယ်နည်းတွေလည်း ကျွမ်းကျင်ခဲ့ရပြီပေါ့။ တစ်ခါ.....ကျွန်တော် အကျဉ်းအကြပ်ထဲ ရောက်စဉ်မှာ ကောင်းကောင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် အံ့အားသင့်တဲ့ စွမ်းရည်တိုးတက်မှု တစ်ခုပါပဲ။
၁၉၈၀ပြည့်လွန်နှစ်၊ ကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အသက်မပြည့်သေးဘူး၊ဒါပေမဲ့ သူတို့တပ်တွင်းမှာ နေထိုင်ခွင့် ပေးခဲ့တယ် အသက်၁၈နှစ် မပြည့်ခင်အထိပေါ့။ အဲဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲ နိုင်ငံရပ်ခြားကိုလွှတ်တဲ့ တပ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ စစ်မြေပြင်က ဂျပန်ပြည်မှာပေါ့။ "My first time but not my lust" story ကို ဖတ်မိဖူးသူဆိုရင်တော့ အဦးဆုံး gaysex ကိုပြသပေးခဲ့သူ Cherokee Indian လေးအကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ငပဲကို ဘယ်လိုပြုစုရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ကို သင်ပေးသူပေါ့။ အဲဒါကို လုပ်ပြီးနောက်မှ gay guys တွေဆိုတာ straight man တွေရဲ့cock ကိုသာ sucked ကြတာ ထုံးစံလို့ အတွေးပေါက်မိခဲ့တာပေါ့။ စစ်သားလေးရဲ့ cock ကိုပြုစုပေးအပြီးမှာ သတိပြုမိတာက sucking လုပ်ပေးရတာ ကိုကြိုက်တယ် ဟီး.....နောက်တစ်ယောက်နဲ့လည်း ကြိုးစားချင်သေးတယ်။ ခပ်ချောချော straight studs တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ချင်တယ်. ...သူ့ငပဲကို အားရပါးရ blowjob လုပ်ပေးချင်လိုက်တာ။ gay guys အချင်းချင်းဒီလို အပြန်အလှန်ပြုစုပေး တတ်ကြတာကို မသိသလို သူတို့ကိုပြန်မပြုစုပေးဖူးပါ။ ကျွန်တော် gay life ကိုမပြောတတ်တော့ပါဘူး...ဟူး။
၁၉၈၀ပြည့်လွန်နှစ်မှာ ကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲမှာပါပဲ။ စစ်တပ်မြို့တော်ရဲ့ Camp Wolters မှာအခြေစိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားကနေ ပြန်ပို့ခြင်းခံရတာလေ ကျွန်တော် အသက်မပြည့်သေးမှန်း တပ်ကတွေ့သွားတာကြောင့်ပေါ့။ တပ်တွင်းဘ၀ဟာ ကျွန်တော်နေထိုင်ဖူးတဲ့ဘ၀တွေထဲမှာ အဆင်ပြေဆုံးပါပဲ။
ကိုယ်ပိုင်လစာအဖြစ် တစ်လကို $18 လောက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တပ်က ကျွန်တော့်ရပိုင်ခွင့်ထဲက ငွေအချို့ကို ကြက်ခြေနီ လို အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် လှူဒါန်းဖို့ယူသုံးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မလှူမနေရပါ။ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အရာရှိက ပြောလေရဲ့ ကျွန်တော်တို့ charities တွေကို လှူဒါန်းဖို့ ငွေလုံလောက် အောင်မထည့်ရင် မင်းတို့မြို့ထဲထွက် ပြီးလည် ပတ်ခွင့်ရလိမ့်မယ်မဟုတ်တဲ့။ ဒီကိစ္စက စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် blackmail ဖြစ်သလို ဖိအားကြီးတစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်။ အတွက် လတိုင်းခေါင်းကျိန်းစရာကိစ္စတစ်ခု ပေါ့လေ။ ရတဲ့ငွေလေးကို shoe polish နဲ့တခြားအသေး ပစ္စည်းလေးတွေပဲ ၀ယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘ၀ဟာ သီးသန့် နေထိုင်မှုအတွက် ခက်ခဲလှချည်လား။
ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရဲ့ အားလပ်ရက်မှာ မြို့ကြီးကိုသွားလည်ဖို့ ဖြုန်းဖို့ငွေအနည်းငယ်စုမိပါရော။ မြို့ကြီးထဲရောက်တော့ ဈေးပေါတဲ့နေရာမှာ တည်းတယ်။ ဘာဂါကို ညစာအဖြစ်စားတယ်၊ ပြီးတော့လမ်းမပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပေါ့။ဒီမြို့မှာ ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲ နည်းနည်းလှုပ်ရှားလို့ရတယ်လေ။
လမ်းမပေါ်မှာ ဘယ်တော့ကြည့်ကြည့် sexiest cowboys တွေချည်းပါပဲ။ သူတို့အားလုံး တကယ် cowboys တွေမဟုတ် ကြပေမဲ့ cowboy တွေလို ၀တ်ဆင်ထားကြတာ။(ကျွန်တော်ထင်တာက သူတို့တွေ စက်ရုံမှာပဲအလုပ်လုပ်ကြတယ်။) များသောအားဖြင့် သူတို့လက်ထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် အိတ်ကပ်ထဲမှာ အရက်ပုလင်းပြားလေးတွေရှိနေတတ် ကြတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဒီရာသီမှာ Fort Worth မြို့ကြီးကခြောက်သွေ့နေလေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က အရက်သောက်စရာဘား မရှိတဲ့မြို့ လေးပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ပုလင်း ဒါမှမဟုတ် စက္ကူအိတ်ထဲထည့်သယ်ပြီး အပြင်ယူဆောင်သွားခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာမြို့ကြီးရဲ့ ဥပဒေနည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့လေ။
ကျွန်တော်သတိထးမိတာကတော့ cowboy studs တစ်ယေက်ချင်းဆီမှာ ပုလင်းတွေတစ်ပုလင်းဆီရှိတယ်ဆိုတာ။ serviceman တစ်ယောက် (ကျွန်တော်တို့အားလုံး uniforms ကိုဝတ်ထား တတ်ကြတယ်။)ကို သူတို့မြင်တဲ့အခါ သူတို့တွေ က ကိုယ်ပိုင်ပုလင်းတွေဆီက အရက်တငုံဆီသောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တတ်ကြတယ်လေ။ serviceman တစ်ယောက်နဲ့ စစ်သား အချို့ လမ်းမကြီးပေါ်ကနေ လမ်းကြားတွေဆီလှမ်းသွားကြတာကို မြင်ရမယ်။ cowboys တွေဟာ သူတို့အမျိုးကိုချစ်တော့ အမျိုးချစ်အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ကြတာပါပဲ။ servicemen တွေဟာ သူတို့မြို့နေ လူထုအတွက် ကောင်းကောင်းအထောက် အကူရသူများမဟုတ်လား။
ဟေး...ကျွန်တော့်ကို လမ်းသွယ်တွေထဲခေါ်သွားပြီး တဂွတ်သောက်ခွင့်ပေးမယ့် cowboy ချောချောတစ်ချို့လိုချင်တယ် တွေ့ချင်တယ်။
လမ်းမကြီးပေါ်က အဆောက်အဦးကြီးတွေကို ဖြတ်လျှောက်လာရင်း ပန်းခြံနားကအဆောက်အဦး ရဲ့ထောင့်ကိုလည်း ရောက်ရော cowboy လေးတစ်ယောက်က သူ့လက်ထဲက ပုလင်းလေးကိုမြှောက်ပြရင်း တစ်ငုံလောက်သောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရော။ သူကတော့အနည်းငယ်သောက်ထားပြီး ထင်ပါရဲ့ ရီဝေေ၀မျက်လုံး အစုံနဲ့လေ။ သူ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို လက်ခံလိုက်ပြီး သူရယ်ကျွန်တော်ရယ် အလင်းရောင်ခပ်မှောင်မှောင် လမ်းကြားထဲ ကိုလျှောက်ခဲ့ကြတယ်။ အစိမ်းရင့်ရောင်ပုလင်းကို ကျွန်တော့်ဆီလက်လှမ်းလိုက်တော့ ယူလိုက်ရင်း တဂွတ်သောက်လိုက်တာ ရင်ထဲပူရှိန်း သွားတာပဲ။ လမ်းဆက်လျှောက်တော့ ပုခုံးကို ခပ်တင်းတင်းသူလက်တစ်ဖက် နဲ့လှမ်းတင်လိုက်တော့ သတိထားမိတာက သူဟာတော်တော်သန်မာသူပဲ။ လမ်းတွေအသာ လှမ်းရင်း စကားတွေပြော ဖြစ်ကြတယ်။ ဒီလူငယ်လေးဟာ ငယ်တယ်၊ အရမ်းကြည့်ကောင်းတယ်၊ horny ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာ တော့ သူဟာအလွန့်ကို sexy ။ ကျွန်တော်မျက်စိ ရှေ့မြင်နေရတာ သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းကျပ် ကျပ်မှာ အထုပ်အထည်ကြီးကြီး....ပေါက်ထွက်တော့မလားပဲ။ ဒါကိုကျွန်တော် ကြိုက်တယ်..... အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းသလို So horny ပေါ့။
ကျွန်တော်ဟာ အရက်သောက်ကျင့်ရှိသူမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် ဒုတိယ တစ်ဂွတ်သောက်ပြီးချိန်မှာတော့ ကိုယ်တွင်းသွေး တွေဆူလာပြီး ဖီးလ်တစ်မျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စကားတွေ အဆက်မပြတ်ပြောရင်း နောက်မှာတော့ sex အကြောင်းစတင်ပြောမိကြတာပေါ့။ သူ့ကိုမေးခွန်းနည်းနည်း မေးကြည့်မိတော့ သူဟာလူပျို သူနဲ့အံဝင်မယ့် မိန်းမတစ် ယောက်လောက်ကို လိုချင်နေပါသတဲ့။ ကျွန်တော်သူ့ကိုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ သူသိအောင် ကြိုးစားဖို့ ဘယ်လိုဒါမှမဟုတ် ဘယ်နေရာက စတင်ရမှာပါလိမ့်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့မှန်း ဘာလုပ်မိမှန်းမသိဘူး သူ့မျက်ဝန်းက အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုး တွေးမိသွားပုံပဲ။ တတိယ တဂွတ်......နည်းနည်းလွတ်စပြုလာပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ cowboy လေးကပြောလေရဲ့ ရွှေပြွန်က ရေသွန်ချင်လို့တဲ့။ ကျွန်တော်က သူ့ဘေးမှာ ဆိုတော့ သူလုပ်သမျှမြင်နေရတော့တာ။ သူ့ဖောင်းကားနေတဲ့ ဘောင်းဘီ ကြယ်သီးတွေကို ဖွင့်တယ်....သိပ်မပျော့နေတဲ့ ငပဲကိုအသာ ဆွဲထုတ်တယ်။ ငပဲက တန်းနေတာဆိုတော့ လက်နဲ့ဆက် မကိုင်ဘဲ အသာလွှတ်ထားလေရဲ့။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းထဲ အရောင်တွေ ပိုတောက်လာရတာပလေ။
တချက်တချက် စိတ်ကိုမနည်းထိန်းရတယ်။ သူ့ငပဲကို ဆွဲကိုင်မိတော့မလို့ အကြိမ်ကြိမ်။ သူ့ပစ္စည်းရဲ့ shape ကတော် တော်လှတာ ဖြူဝင်းဖောင်းကြွ နေတဲ့ ဒုံးပျံတစ်စင်းပါပဲ။ သွေးရောင်လွှမ်းနေတာကလွဲလို့။ သူသောက်ချင်သေးတယ် ဆိုတော့ အလင်းရောင်နည်းရာ လမ်းကြားဆီ ပြန်လျှောက် နောက်တဂွတ်။ သူ့ဘောင်းဘီက ကြယ်သီးတွေကို သူပြန်တပ်မထားတော့ မာနေတဲ့ သူ့ငပဲကို ဘောင်းဘီထဲမှာ တ၀က်တပျက်တွေ့နေရတာပေါ့။ တဒုန်းဒုန်းရင်ခုန်သံတွေ ရပ်တန့်လို့ မရတော့ဘူး။ှုI was horny and ready.
ဟိုးလမ်းကြားအတွင်းပိုင်းထိ လူတွေသိပ်မမြင်ရမယ် 'ဘိ' ကိုရှာဖို့ ထပ်လျှောက်ဖြစ်တယ်။ သူကျွန်တော့်ပခုံးကို လှမ်းဖက်ပြီး နောက်တငုံတိုက်ပြန်တယ်။ That made me goes crazy. အရက်ကိုကျွန်တော် သောက်နေကျလူ မဟုတ်တော့ မူးချင်ချင်ဖြစ်လာပြီ။ သူလည်းနောက်တဂွတ်သောက်တယ်ြ့ပီးတော့ စိတ်တွေတောင်ထလာပြီတဲ့။ ကျွန်တော် ဘာပြောမိမှန်းကို ပြောပြီးမှာ သတိထားမိတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် သူ့ဒစ်ကိုပြုစုပေးဖို့လိုနေပြီပေါ့ လို့ပြောမိ တာလေ။ သူကတော့ သူ့အခြေအနေငြိမ်းသွားဖို့ တတ်နိုင်ပြီးသားပါတဲ့။
နောက်နည်းနည်းကြာတော့ ပြောပြန်ရော သေးပေါက်ချင်လာပြန်ပြီတဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူအရမ်း သောက်ထားတာဆိုတော့ သူ့ဒစ်ကြီးကြီးကို အပြင်ဆွဲ မထုတ်နိုင်ဘူးတဲ့။ ကျွန်တော်လည်းသောက်ထားပေမယ့် သူကပိုအရှိန်ရနေသပေါ့။ သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီ ကျပ်ကျပ်ကနေ မာတောင်နေတဲ့ သူ့ဒစ်ကို အပြင် ထုတ်ပေးဖို့ ကူညီပါတဲ့။ ဒါမျိုးဆို ကူညီဖို့အသင့်ဆိုတော့ သူ့လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ပေးရတာပေါ့လေ။။ ဘောင်းဘီကြယ်သီးတွေက တဆင့် ခပ်နွေးနွေး အရာကို အသာဆွဲထုတ်လိုက်မိတယ်။ သူကဆက်ကိုင်ထားဆိုတော့ ကိုင်ထားရသပေါ့။
သူ့အလိုလိုသိနေတာကတော့ သူ့ငပဲကို ဆက်ပြီးကိုင်ထားစေချင်တယ်ဆိုတာပေါ့။ သူ့ငပဲထိပ်ကလေးကို အသာ ခပ်ဖွဖွ ကိုင်ထားတာ သွေးခုန်နှုန်း တဒုတ်ဒုတ်ကို ခံစားရနေသလို ပိုပိုပြီး မာလာသလိုပဲ။ ဒါနဲ့ သူ့ဟာကို လက်နဲ့ကစား ပေးမလား တဲ့။ Hey, I loved that job. ကျွန်တော်ခပ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ အသာအယာထုပေးဖြစ်တယ်။ စိတ်ထဲကယောင် ကယင်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကပါ အရမ်းဆာလာသလိုပဲ။ ကျွန်တော့် ပခုံးပေါ်ကို သူ့လက်တွေလှမ်းတင် ညင်ညင်သာသာ ကိုင်ရင်းပြော တာက သူအရမ်းအထီးကျန်ဆန်တာပဲ၊ အရင်းနီးဆုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လိုနေခဲ့တာတဲ့။ ကျွန်တော် လည်း ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ် သူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်နေခဲ့တာလို့ ပြောမိသပေါ့။ အမူးသမားစကား မဖြစ်တဖြစ်လေ။
အားလုံးပြီးတော့ ဘာဆက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါသလည်း။ ကျွန်တော်ကရောဘာလုပ်ပေးဖြစ်မယ်လို့တွေးမိပါသလည်း။ ဖြည်းဖြည်း....ဖြည်းနဲ့ သူ့ဆွဲဆောင်မှု ကို မတင်းနိုင်တော့ဘူး။ နူးညံ့သော အရေပြားလေးက တစ်ဆင့် အရသာရှိတဲ့ sausage ကြီးပါးစပ်ထဲ အပြည့်ထည့်လိုက်မိတော့တယ်။ အံ့အားတသင့် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်တဲ့ ဖီလင်ကို ငယ်ထိပ်ကနေခြေ ဖျားအထိ တရှိန်းရှိန်းပါ။ ဒီအတွေ့အကြုံကို Indian စစ်ဗိုလ်လေးနဲ့တုန်းက ခံစားဖူးပေမယ့် အခုအချိန်မှာ ကျေနပ်မှုရသကို ပိုခံစားရသလိုပဲ။ လူတစ်ယောက်ကို blowjob လုပ်ပေးတဲ့အခါ ပိုပြီးကျေနပ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ ပိုသိလာ ပြီလေ။
ကွမ်းသီးခေါင်းတစ်ဝိုက်ကို လျှာနဲ့ဝိုက်ကာ ၀ိုက်ကာ ကစား။ သူ့တင်ပါးတွေကို အသာကိုင်ရင်း ခေါင်းကို ရှေ့တိုးနှောက်ငှင် လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူကျွန်တော့် ခေါင်းကို အသာကိုင်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခါးကို ကစားပြီး မွှေလာရော။ သူနောက်တဆင့် တက်ဖို့ မကြိုးစားသလို တခြားဘာမှ မလုပ်ချင်ဘူးထင်ပါရဲ့။ သူ့ငပဲကို sucking လုပ်ပေးနေတာကိုပဲ ခါးကိုသွက်သွက် ကစားရင်း ဖီးလ်ယူနေလေရဲ့။ ပါးစပ်ထဲတိုးတိုး ၀င်လာတဲ့ သူ့ cockု ကို လျှာဖျားနဲ့ မသိမသာ တွန်းတွန်းထုတ်ပေးတော့ သူကြိုက်သွားပုံပဲ။ "Good....that feel's so good!"
He fucked my mouth.......my mouth ခပ်သွက်သွက်စောင့်ချက်တွေနဲ့အတူ သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ချွေးတွေရွှဲလို့။ သူ့တင်ပါး အိအိတွေက ခပ်တင်းတင်းဖြစ်လာသလို ခေါင်းကိုကိုင်ထားတဲ့ လက်အစုံဟာလည်း ခပ်ဖြည်းဖြည်းလျော့ လာတယ်။ လည်ချောင်းထဲ လျောကနဲ အဆုံးထိထိုးထည့်ရင်း သူ့အမြှောက်ကနေ ပန်းထုတ်လိုက်တာ ပါးစပ်ထဲထိလျှံ ကျလာတယ် ဗျာ။
သူကပြောတယ် မျိုချလိုက်......မျိုချလိုက်ပါတဲ့။ ဒီတော့....မျိုချလိုက်တော့တာပေါ့။(ဒါဦးဆုံးအကြိမ်ပါ။) ကျွန်တော် အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ "Hey, that was fun." သူ့ငပဲပေါ်မှာ ချိုမြမြ အရည်တွေတစ်စက်မှ မကျန်ခြောက်သွေ့ သွားသည်အထိ စုပ်ယူခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ မျိုချခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အစဦးဘ၀တွေရဲ့ အတွေ့ဦးတွေဖြစ်ခဲ့ ရတာပေါ့။ သူနဲ့ပြီးသွားပြန်တော့ နောက်အသစ်ခပ်မိုက်မိုက်လေး လိုချင်ပြန်ရော။ ဒါကျွန်တော့်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ဖြစ်ခဲ့သလို ပိုပိုစွဲလမ်းလာရတဲ့ gaylife အစပါပဲ။ သူဟာအမှန်တကယ် မြင်းတစ်ကောင်ကိုစီးပြီး မြက်ခင်းပြင်မှာ အလုပ် လုပ်တဲ့ cowboy တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သလို လူလိမ်တစ်ယောက် လည်းဖြစ်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒီမှာလာ ပြီး အချိန်ဖြုန်းဖို့ နောက် တစ်ကြိမ် ငွေစုမိဖို့ weekends တွေမှာလာပြီး next studs ကိုရှာဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ဘူး. ..မစောင့် ချင်တော့ဘူး။
Thanks for reading my story. အဲဒီအဖြစ်အပျက်လေးဟာ နှစ်များစွာကြာသွားပါပြီ။ ကျွန်တော့် အဖြစ်အပျက် ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်မိပြီး တစ်ခုခုခံစားရတာတွေကို reply message လေးများလုပ်ခဲ့ရင် တကယ်ဝမ်းသာ မိမှာပါ။...ကျေးဇူး။
Posted by Alex Aung at 12:21 PM No comments: